Ukuhanjiswa kweSpanish ngexabiso elifanelekileyo lemali | Iindaba zeGajethi
Ukuhanjiswa kweSpanish ngexabiso elifanelekileyo lemali
UJose Alfocea | | Iiselfowuni
Ukuba ucinga nge Hlaziya ifowuni yakho endala kwaye ufumane i-terminal eneempawu ezingcono, Umgangatho ngakumbi kunye nocoselelo ngakumbi kunye noyilo lwala maxesha, ngokuqinisekileyo ukhe wacinga ngeempawu ezininzi. Kodwa, ngaba uqaphele ukuba zonke okanye phantse zonke ezi ntlobo zivela kwamanye amazwe? Ngaba azikho ii-mobiles zaseSpain, ubuncinci, onokuzibandakanya njengokukhetha?
Namhlanje siza kuphakamisa ukhetho lwe Ukuhanjiswa kweSpanish ngexabiso elifanelekileyo lomgangatho. Mhlawumbi ezinye zazo azivakali ngathi ziqhelekile kuwe, nangona kunjalo, uya kuba nakho ukuqinisekisa ukuba zizitishi ezinezinto ezisemgangathweni ophezulu, intsebenzo elungileyo, kunye namaxabiso amkelekileyo kakhulu aya kuvusa umdla wakho.
1 Umkhosi we-Weimei 2
2 Ifowuni yamandla UMax 2+
3 Ifowuni yamandla Neo 2
Umkhosi we-Weimei 2
Mhlawumbi ngegama layo unokucinga ukuba i-clamp ihambile kwaye le yinkampani yaseTshayina okanye yaseMpuma kodwa hayi. Weimei unjalo enye yezona zinto zisandula ukwenziwa zefowuni zaseSpain. Isekwe eMadrid, eyona njongo yabo iphambili kukubonelela izixhobo ezisemgangathweni ngamaxabiso amahle. Umzekelo olungileyo walo mgangatho wexabiso lisemgangathweni yi Umkhosi we-Weimei 2, I-smartphone eyenziwe ngentsimbi kwaye iyafumaneka ngemibala emibini (igolide kunye nomnyama) uyilo olucokisekileyo lwemigca egudileyo, egobile.
Inika enkulu Iscreen se-intshi eyi-5,2 ngesisombululo esingu-1280 x 720 kwaye ngaphakathi ngaphakathi kuso kuhlala a Iprosesa ye-quad-core ye-ARM Cortex A53 kwi-1,45 GHz ehamba kunye 3 GB ye RAM y 32 GB yokugcina Ngaphakathi esinokuthi sandise umbulelo kumakhadi ayo Micro SD ukuya kuthi ga kwi-256GB.
Njengenkqubo yokusebenza ine-interface ye-WeOS esekwe kuyo Android 7.0 Nougat. Kwaye xa kuziwa kwividiyo kunye nokufota, idibanisa ifayile ye- Ikhamera ephambili ye-13 MP eneendlela ezili-14 zokufotaay a cIkhamera yangaphambili ye-16 MP eyenzelwe ngokukodwa ukufumana iiselfie ezigqwesileyo.
Kananjalo asinakulibala ukuba nesisa kwakhe I-4.000 mAh ibhetri apho unokuhlala khona iintsuku ezimbalwa kude neplagi, kunye nokusebenza kwayo Flip Intlawulo ekuvumela ukuba wabelane ngebhetri nesinye isiphelo sendlela.
Ukongeza, i-Weimei Force 2 ikwabonelela ngenkxaso I-SIM yesibiliisibane esingaphambili, umfundi weminwe uqhagamshelo lwamva lwedijithali 4G, Bluetooth 4.0, IGPS / A-GPS, Iplagi yejack ye3,5mm kwii-headphone kunye nezivamvo ezininzi onokuthi uzonwabele ngokupheleleyo.
Unokufumana ngcono malunga nesi sigxina kwi website esemthethweni kodwa ukuba ukhetha ukugcina i-euro ezimbalwa, unokukhetha i- Umkhosi we-Weimei.
Ifowuni yamandla UMax 2+
Ngoku sijikela kwinkampani evela eAlicante, eyaziwayo ngezithethi zayo, iinqaba ezinesandi, ii-headphone, iitafile kunye nokunikezela ngeefowuni zaseSpain ngomlinganiso wexabiso lomgangatho omangalisayo. Ndibhekisa kwiNkqubo yaMandla kunye nayo Ifowuni yamandla UMax 2+, I-smartphone eyilelwe ukubonelela nge "Amava e-multimedia egqibeleleyo".
Ine- 5,5 intshi IPS HD screen (Iipikseli eziyi-1280 x 720) ezilungele ukujonga umxholo wemultimedia ehamba kunye neyakho izithethi ezibini zeXtreme ezibonelela ngamandla amakhulu kunye nesandi esemgangathweni.
Ifika nge I-Android 6.0 Marshmallow njengomgangatho onikwe amandla yi-53 GHz ARM Cortex A1.3 quad-core processor kunye neMali-T720MP2 GPU, zonke zikhatshwa I-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina yangaphakathi onokuyandisa nge ikhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-128GB eyongezelelweyo.
Kwaye ukuba ufuna ukuthatha iifoto kunye / okanye urekhode iividiyo, ungayenza enkosi kuyo Eyona khamera iphambili ine-13 MP Samsung sensor Ixhotyiswe nge-autofocus kunye nefowuni ye-LED; kodwa ukuba ukhetha iiselfie, i ikhamera yangaphambili idibanisa i-Samsung sensor 5 MP.
Ukongeza kuko konke oku kungasentla, i-Energy Phone Max 2+ ikwanayo nenkxaso ye-SIM ezimbini, iBluetooth 4.0, A-GPS, 4G, iWi-Fi, isinxibelelanisi sejack esingu-3,5 mm, ibhetri engama-3.500 XNUMX mAh, iRadiyo ye-FM, kunye nezivamvo ezininzi.
Ifowuni yamandla Neo 2
Kubasebenzisi abaninzi, ifowuni ene-5,5-intshi yesikrini iyifowuni eninzi, kwaye bakhetha i-terminal ekusebenziseni okungaphezulu kwaye banokuyisebenzisa ngesandla esinye. Ukulungiselela le nto, enye yee-mobiles zaseSpain ezinexabiso elifanelekileyo lemali yile Ifowuni yamandla Neo 2, ewe, siphinda uphawu.
Ngaphantsi kwama-euro angama-70 unokuba nomgangatho olungileyo kunye nokulawulwa kwe-smartphone, nge Iscreen se-IPS ye-4,5 intshi kunye nesisombululo se-FWVGA (854 x 480 pixels) sikhatshwa ngu isithethi seSandi seXtreme kwaye, njengenkqubo yokusebenza, I-Android 6.0 Marshmallow Ixhaswe yi-53GHz ARM Cortex A1.0 quad-core processor neMali-T720 MP1 GPU, 1 GB ye RAM y 8 GB yokugcina yangaphakathi onokuyandisa ngekhadi microSD ukuya kuthi ga kwi-128GB kunye I-2.000 mAh ibhetri.
Ngokomfanekiso kunye nevidiyo, iFowuni yeNandla yeNeo 2 ibonelela nge- Ikhamera ephambili ye-5 MP nge-autofocus kunye ne-flash flash, kunye ne Ikhamera yangaphambili ye-2 MP. Ngaphandle koko, kubandakanya izinto ezifanayo (i-Dual SIM, iBluetooth, njl.), Nangona eli xesha likhatshwa izindlu ezimbini ezongezelelweyo ukuze uhlale usefashonini.
Kwaye ke siza kwabanye abenzi abaphambili be- Ukuhanjiswa kweSpanish, iMadrid BQ esisinika oku I-BQ Aquaris U Sinokufumana kuhlobo kunye y Lite malunga nama-euro angamashumi amabini ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokwahlukeneyo.
I-BQ Aquaris U yi-smartphone ene 5 intshi IPS HD screen (720 x 1280) kunye nenkqubo yokusebenza Android 7.1.1 Nougat Egcina iprosesa yeQualcomm ngaphakathi Snapdragon 430 1,4 GHz octa-core kunye neAdreno 505 GPU kunye 2 GB ye RAM, 16 GB yokugcinaokanye eyandisiweyo yangaphakathi ngekhadi microSD ukuya kuthi ga kwi-256GB kunye I-3080 mAh ibhetri.
Ine- Ikhamera ephambili ye-MP ye-13 MP ngesigaba sokufumanisa i-autofocus (PDAF) kunye Ikhamera yangaphambili ye-5MP Ukongezwa.
Ezinye izinto zibandakanyiwe yiBluetooth 4.2, GPS, Dual SIM, NFC, 4G
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukuhanjiswa kweSpanish ngexabiso elifanelekileyo lemali
INook GlowLight 3 entsha ifika inki ye-elektroniki
Umxube wegraphene kunye nesilivere unokuthintela isikrini sakho se-smartphone ukuba singaphuli